Seces – Minisitera mpiahy: mihenjan-droa ny tady, mitohy ny fitokonana | NewsMada
Seces – Minisitera mpiahy: mihenjan-droa ny tady, mitohy ny fitokonana
Tsy mbola milamina ny tontolon’ny fampianarana ambony eto Antananarivo. Mahazo vahana ny fitokonana raha miantso fifampidinihana kosa ny minisitera mpiahy.
Hanao fivoriambe sy fizaram-baovao amin’ny mpanao gazety ny mpampianatra mpikaroka mpikambana ao amin’ny sendikà Seces sampana Antananarivo, rahampitso maraina eny Ankatso, araka ny fanambaran’ny filohany, Ravelonirina Sammy Grégoire. Mbola miato ny fampianarana sy ny fikarohana eto Antananarivo, hatramin’io fotoana io, fa miandry ny fandraisana andraikitra avy amin’ny fanjakana izy ireo. Efa nanao fampilazana mialoha hirosoana amin’ny fitokonana ny mpampianatra ary nanaja ny ambaratonga samihafa.
Nanamafy kosa ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana momba ny siansa, Razaranaina Jean Claude, fa misokatra ho an’ny fifampidinihana izy ireo raha misy fitakiana. Tsy naharay taratasy fampahafantarana ny fitakiana avy amin’ny Seces ny minisitera raha nanamarika kosa ny filohan’ny Seces fa maro ny taratasy fampahafantarana nalefa eny amin’ny tomponandraikitra. Zon’ny mpiasa rehetra ny mitokona fa tokony hanaraka ny fenitra midinika. Tsy nanaja io fenitra io ny Seces fa niroso avy hatrany amin’ny fitokonana. Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny roa tonta.
Nitaky ny hiverenan’ny fampianarana ny mpianatra ao anatin’izany savorovoro izany satria lasa miitatra be ny taom-pianarana.
Hihemotra ny fidirana amin’ny taom-pianarana 2020
Vokatry ny fitokonana samihafa teny anivon’ny oniversite sasany, mety hihemotra ny fidirana amin’ny taom-pianarana 2020 ho an’ny fampianarana ambony raha noheverina fa tokony ho ny volana marsa ny fotoam-pidirana iraisan’ny oniversite enina.
Momba ny bakalorea, hivoaka ny 7 novambra ny valin’ny fanadinana fihodinana manokana faharoa ho an’ny faritany enina. Anjaran’ny oniversite enina ny mamoaka ny valim-panadinana sy ny manome ny diplaoman’ny bakalorea.